Rallye moi(s) théâtre andiany faha-4: hisokatra amin’ny toerana maro ny hetsika | NewsMada
Rallye moi(s) théâtre andiany faha-4: hisokatra amin’ny toerana maro ny hetsika
Na heverina ho zavakanto nampidirin’ny vahiny aza ny teatra, tsy azo lavina kosa fa mahazo laka sy faka eto Mpadagasikara izy. Misy hatrany ny ezaka hampiroboroboana izany hataon’ny Compagnie Miangaly Théâtre…
27 marsa, fankalazana ny Andro maneran-tany ho an’ny teatra. Tafiditra ao anatin’izany ilay hetsika fanaon’ny Compagnie Miangaly Théâtre nampitondraina ny lohateny « Rallye moi(s) théâtre » hiditra amin’ny andiany faha-4 amin’ity taona 2021 ity, manomboka ny 8 marsa ka hatramin’ny 27 marsa izao. Amin’ny maha hazakazaka azy, misy hatrany ny fangitra iaingana sy ny dingana lalovana, raha ny fanazavan’ny mpikambana eo anivon’ity kaompania tarihin’i Christiane Ramanantsoa ity. Misy hatrany koa ny zava-baovao hoentin’izy ireo.
Ho an’ity andiany faha-4 ity, anisan’ny lehibe indrindra amin’izany ny fanapariahana sy ny fampivelarana ny hetsika any amina toerana maro tahaka ny eny Antaninarenina (Buffet du jardin), ny onivesiten’Antananarivo, ny ao amin’ny Tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha, ny ao amin’ny résidence de Suisse, ny ao amin’ny Kudeta Urban Club Anosy, ny eny amin’ny Nexta Andranomena, sns. Tanjon’ny mpikarakara rahateo ny hampahafantatra sy hizara ny kanto fonosin’ny teatra.
Marihina fa anisan’ny mampiavaka ny « Rallye moi(s) théâtre » ny fisian’ny fanofanana sy ny fampitana momba ny « improvisation théâtrale ». Misy ny fiaraha-miasan’ny Compagnie Miangaly Théâtre sy ny Ligue d’improvisation de La Réunion amin’izany. Ho an’ity taona ity, hisy ny « spectacle d’improvisation » ny 19 marsa.
Fantatra fa tokony ho azo ilalaovana teatra avokoa ny velarana na habaka rehetra ka azo ampiasaina amin’izany ireo fitaovana na zavatra efa misy eo amin’ilay toerana raha ilaina.